Communities Archives - Page3of 27 - Media Campaign Against Covid19
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ जेठमा संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘अब नेपालमा गरिबीकै कारण कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन, यो सरकारको प्रतिबद्धता हो ।’ तर, त्यसको चार दिन बित्न नपाउँदै सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–५, पथरी रामपुर टोलका मलर सदाले खान नपाएकै कारण ज्यान गुमाए । स्थानीय...
सिन्धुली — कमलामाई नगरपालिका-१४ का वडाध्यक्ष जितलाल अधिकारी दनुवारले राहत वितरणका लागि वडामा आएको ३ सय २० बोरा चामलसहितको प्याकेज बुझे । चामलको बोरा उचालेपछि उनलाई शंका लाग्यो । नजिकै रहेको पसलमा बोरा तौलिए । २० किलो हुनुपर्नेमा १८ किलोमात्र भयो । एउटा बोरा त्यस्तो भएको हो कि भनेर १० बोरा पालैपालो तौलिए तर कुनै बोरा...
राजविराज — स्थानीय प्रशासनले मापदण्डको पालना नगरेको भन्दै सप्तरीका पालिका प्रमुखहरुले क्‍वारेन्टाइन व्यवस्थापन छोड्ने चेतावनी दिएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीद्वारा सोमबार राजविराजमा आयोजित बैठकमा उनीहरुले कोभिड–१९ सम्बन्धी व्यवस्थापनमा प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेको आरोप लगाए । ‘क्‍वारे...
बर्दिया — पाँच दिन भयो, परेला ओभाएका छैनन् । सान्त्वना दिन कसैले आँगनमा टेक्यो कि गुलरिया–९ कि नन्कई गोडिया भक्कानिएर रुन थाल्छिन् । आमा रुन थालेपछि दुई छोरा र एक छोरीलाई सम्हालिन कठिन हुन्छ । नन्कईका पति ५५ वर्षीय जोद्धी गोडियाको पाँच दिनअघि सदरमुकामस्थित बबई बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको थियो । अछा...
समाजमा वातावरणीय शिक्षाको विकास (सीड)ले दाङको दुई गाउँपालिकाका सिमान्तकृत समुदाय भित्रका गर्भवति, एकल महिला , सुत्केरी तथा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई राहत प्रदान गरेको छ । आईएम नेपालको सहयोगमा दंगीशरण गाउँपालिका र शान्तिनगर गाउँपालिकाका एकसयजनालाई राहात प्रदान गरेको हो । सीडका अध्यक्ष राममोति चौधरीका अनुसार दंगीशरण...
काठमाडौँ — लकडाउन लम्बिँदै जाँदा कामविहीन भएका कोहीले सडकमा मागेर पेट भरिरहेका छन् । कोही राहतको भरमा छन् । केहीले ऋण गरेर घर खर्च चलाइरहेका छन् । घर भाडा तिर्न नसकेकाहरू हजारौं छन् । कृषकले उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई अहिले रोगको भन्दा पनि भोगको चिन्ताले सताएको छ । सिन्धुपाल्चोक मुडेका...
वीरगञ्ज । पछिल्लो समय भारतबाट नेपाल फर्किनेहरूको लर्को नै लागेको छ। नेपाल-भारत सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई विभिन्न नाकाबाट स्वदेश फर्काउने कार्य प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भइरहेको छ। यस्तै, वीरगञ्ज नाकाबाट बुधबार मात्रै करिब ६ सयको हाराहारीमा नेपाली स्वदेश भित्रिएका छन् । यसरी स्वदेश भित्रिनेमा पर्सा, ब...
सिंहदरबारले किट दिएन, कपिलवस्तुका स्थानीय तहले आफैं किने
कपिलवस्तुका स्थानीय तहले आफैं कोरोनाको पीसीआर जाँच्ने भीटीएम किट खरिद गरेका छन् । उनीहरुले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको स्वाब संकलनसमेत आफैं सुरु गरेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारसँग क्वारेन्टाइनमा भएकाहरुको कोरोना जाँचका लागि पटक-पटक माग गर्दासमेत किट अभाव देखाएर पन्छिएपछि कपिलवस्तुका स्थानीय तहले आफैं किट खरिद गरेका ह...
बुटवल वडा न. ६ र ४ का एकल महिलालाई राहात वितरण
बुटवल । कोरोना महामीको मार खेपिरहेका मजदुर एकल महिलाहरूलाई विहिबार राहात वितरण गरिएको छ । ईनरह्विल क्र्लब अफ बुटवल, एकल महिला समूह रूपन्देही, अम्बेडकर सोसियल फाउन्डेसनको संयुक्त पहलमा ५० जनलाई राहात स्वरूप खाद्यान्न वितरण गरिएको हो । राहात वितरणको शुभारम्भ बुटवल वडा न ६ का वडाअध्यक्ष जगदिश प्रसाद आचार्य, संविधानसभा ...
दुईजना नेपाली भेट हुन वित्तिकै एकले अर्कोलाई सोध्छन् — भात खानु भयो ? यसबाटै प्रस्ट हुन्छ कि, हाम्रो खानेकुरा भनेको नै भात हो । हुन पनि हो, हामी नेपाली भात मात्र धेरै खान्छांै । कोहि दिनको दुईपटक, कोहि तीन पटक, कोहि त चार पटक सम्म पनि भात खाएको देखेको छु मैले । “ हाम्रो खानपानमा कुल क्यालोरीको ४० प्रतिशत भातले योगद...